Home Wararka Dibada Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika
Kooxo Burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa meelo kamid ah dalkaas waxaa ay kudileen Wiil Dhalinyaro Soomaali ah, kaas oo kamid ahaa Dhalinyarada dalkaasi u tegay inay ka Shaqeystaan.
Alle Ha u Naxariistee muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Cabdicasiis Axmed Siciid, ayaa lagu Toogtay Xaafadda South Gate oo ka tirsan Magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika, kadib markii Burcad hubaysan ay ku weerareen Dukaankiisa.
Mid kamid ah Soomaalida kunool halka uu dilka ka dhacay ayaa sheegay in ka sokow muwaadinka Soomaaliga ah ee la dilay ay jireen laba kale oo si dirqi ah kaga badbaaday weerarkaas.
“Dkaanka ayuu ku jiray, Tuugada markay soo gashay Dukaanka, kadibna si hal-haleel ah ayey isaga xabadda ugu bilaabeen, dhaawac halis ahaa gaaray, isla markiiba intaan Isbitaalka la gaarsiinin ayey Nafta ka baxda, Laba Wiil oo la joogtayna midna wuu cararay kii kalana way qabteen balse waxba ma gaarsiinin” ayuu yiri mid kamida Soomaalida ku sugneyd Goobta.
Alle ha u Naxariistee Cabdicasiis Axmed Siciidayaa kamid ahaa Dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhowr iyo Toban Sano deganaa Dalka Koonfur Afrika, waxaana Burcadda ka dambeeyay dilkiisa ay wateen Gawaari badan si ay wax ugu dhacaan.
Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa si joogta ah loogu dilaa Soomaalida, waxaana todobaadkaan Kooxaha Burcadda ah ay dhac u geysteen Goobo Ganacsi oo dhowr ah, kuwaas oo ay lahaayeen Dhalinyaro Soomaaliyeed.
Previous articleCiidamada dowladda & Booliska Koonfur oo howlgal Wadajir ah fuliyay
Next articleDuqa Muqdisho & Duqa Magaalada Konyo oo heshiis kala saxiixday
Samia Suluhu madaxweynaha Tanzania Oo Fariin La Yaab Leh U Dirtay...
Guriceel: Sakaaro Dhal ah Oo Luuqada Carabiga Ku hadasha
Xasan Sheikh Farriin U Diray Madaxweynaha Dalka Jabuuti